Ampiasao ara-dalàna amin'ny fananan-tany ho Expatriate. Torolàlana momba ny fividianana trano any UAE, Dubai. 0000
Ahoana ny fomba hividianana vola amin'ny ara-dalàna amin'ny fananan-tany ho mpanjifa. Torolàlana momba ny fividianana trano any Dubai
Leave a Comment / mpiaro, Blog, Mpisolovava fananana, Varotra sy hofa fananana mifaka / By Sarah
Manambola ara-dalàna amin'ny trano sy tany Expatriate, vahiny, na mpifindra monina ao Dubai
Miaraka amin'ny isan'ny mpitsoa-ponenana izay mitombo isa, ny fangatahana trano any Dubai dia mitombo haingana koa. Raha te hampiasa vola amin'ny trano any Dubai, zava-dehibe ho an'ireo izay tsy manana ny toeran'ny toeram-ponenan'i Emirate ny mahatakatra izay tokony hataon'izy ireo ary ohatrinona no avela hampiasa vola. Misy ny lalàna mazava momba ny vola azo apetraka sy ny karazana fampiasam-bola azo avela. Na izany aza, tsy misy fetrany ny vola azo amin'ny famatsiam-bola raha vantany vao nahazo ny toerana onenanao ianao.
Amin'ny ankapobeny, ny fananan-tany no fampiasam-bola be indrindra sy be mpitady indrindra ho an'ny ankamaroan'ny olona. Tianay ho hitan'ny masonay ny vidin'ny volanay. Na izany aza, mety hampatahotra ny fividianana trano sy tany, indrindra ho an'ireo mpifindra monina, vahiny ary mpifindra monina monina any ivelany. Misy lalàna, lalàna, ary fameperana manokana izay tsy maintsy harahin'ny tsirairay hentitra araka izay azo atao ny fividianany.
Vakio hatrany raha mila toro-hevitra vitsivitsy ianao ny fomba fampiasana ara-dalàna amin'ny Real Estate as Expatriate.
Inona no atao hoe trano?
Ny fananana trano dia endrika fananan-tany izay mampiditra indrindra ny tany misy fanatsarana maharitra mifamatotra amin'ny tany, na voajanahary izany na artifisialy.
Ny fananan-tany dia mety ho fampiasam-bola ho an'ny tanjona ara-barotra sy tsy miankina. Saingy alohan'ny hividianana lasantsy hividianana trano any Dubai dia zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa misy lafiny ara-dalàna tokony hodinihina. Lalànan'ny trano sy tany laharana faha-7 amin'ny 2006: lalàna momba ny fisoratana anarana momba ny tany any Emirà mifehy ny fananan'ny vahiny an'ny fananana ao Dubai. Manokana, ny andininy (4) amin'ny lalàna No. 7 amin'ny 2006 dia mamaritra ireo afaka mividy sy hanana fananana any Dubai: olom-pirenena UAE ary Ny Filan-kevitry ny fiarahan'ny Gulf Cooperation (GCC) olom-pirenena.
Ankoatr'izay, ny vahiny, mpifindra monina, na mpila ravinahitra dia manana tombontsoa hividy fananana amin'ireo faritra voatondro ho fananan-tany vahiny amin'ny fananan-tany na tompona trano. Ity ambany ity misy adihevitra lalina kokoa momba an'io lohahevitra io.
Amin'ny ankapobeny, ny fananan-tany no fampiasam-bola be indrindra sy be mpitady indrindra ho an'ny ankamaroan'ny olona.
Torolàlana amin'ny fividianana trano any UAE, Dubai amin'ny maha Expatriate azy
Fantaro ny toeranao mividy: Karazana fananana fananana any Dubai.
Araka ny efa noresahina tetsy aloha, ireo vahiny, mpifindra monina ary mpivahiny dia afaka mividy ny fananany any Dubai izay omen'ny lalàna mifehy ny fananan-tany na ny lalàna laharana faha-7 amin'ny 2006 any amin'ireo faritra voatondro ho fananana malalaka. Na izany aza, ny faritra malalaka toy ny Dubai International Financial Center dia manana ny lalàna miavaka momba ny fananana. Ny teratany UAE sy ny orinasany dia avela hanana tany na aiza na aiza ao amin'ny Emira. Na izany aza, ireo orinasa manana tompon-tany tsy UAE dia tsy raisina ho toy ny filankevitry ny fiaraha-miasa UAE NA Golfa raha tsy orinasa iraisan'ny daholobe iraisana.
Ary koa, misy karazam-pananana hafa mety azon'ny vahiny miaina. Fananana fananan-tany izany. Ireo teratany tsy UAE dia manan-jo hanana trano lava, musataha, anaram-boninahitra an-tsokosoko, na usufruct raha mbola avelan'ny Mpanjakan'i Dubai izy ireo. Ny usufruct dia ara-dalàna maharitra mandritra ny 99 taona mba hahafahan'ny teratany tsy UAE hanana fananana irery amin'ny faritra voafantina manokana. Na izany aza, ny vahiny tsy hanana ny tany anaovana ny fananana; ny tompony farany dia miverina amin'ny tompony. Zava-dehibe ny fahafantarana ny toerana misy anao amin'ny maha-vahiny, na amin'ny maha-izy azy na amin'ny maha-orinasa anao, hamantatra ireo faritra ahafahana manana tany any UAE.
Ny rantsam-panjakana foibe voampanga amin'ny fampiharana ireo lalàna ireo dia misy ny Departemantan'ny Tany Dubai sy ny maso ivoho mifehy ny trano sy tany.
2. Fenoy ny fomba fividianana departemantan'ny tany Dubai departemanta rehetra.
Ny DLD no vatana lehibe indrindra amin'ny trano sy trano ao Dubai. Ity fikambanana ity dia manapa-kevitra hoe iza amin'ireo olona mendrika ny ho tonga tompon'ny trano any amin'ny firenena. Izy io ihany koa dia mamaritra hoe rahoviana ary ahoana no ahafahan'ny trano famindrana ny fananana ka noho izany no fikambanana lehibe mifandraika amin'ny raharaha any Dubai. Ny famenoana ny dingana rehetra amin'ny alàlan'ny DLD dia ahafahanao mizaka ny fanananao sy miantoka ny fanontanianao raha tsy misy fanelingelenana ara-dalàna. Izay maniry, na tompon'ny trano misy amin'izao fotoana izao dia tsy firenena nasionalin'ny UAE dia tokony hiantoka fa hitohy hatrany amin'ny DLD izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy misy fiantraikany amin'ny fifanarahana ankehitriny ny fanavaozana na fanovana ny politika.
3, Mitadiava faritra ahafahanao manana trano sy tany.
Ny andininy faha-3 amin'ny lalàna laharana faha-3 amin'ny taona 2006 dia mamaritra ny velaran-tany voatondro ho fananana fananana an-tsokosoko izay misy olona tsy UAE mety hanana trano na manana ny fampanofana. Ireo faritra ireo dia misy ny Palm Jumeirah, Burj Khalifa, Dubai Marina, Discovery Gardens, The World Islands, ary International City ankoatry ny hafa. Misokatra ireo faritra ireo avy eo mba hampiasain'ireo mpivahiny tsy UAE izay nanao fampiasam-bola tany Dubai. Na izany aza, ny fampandrenesana ny lalàna mifehy ny fananan-tany amin'ireto faritra ireto dia ny olom-pirenena tsy avy any UAE sy ny orinasan'izy ireo dia afaka mampiditra orinasa malalaka any Dubai fa tsy tokony hisoratra anarana amin'ny trano anaran'ny orinasa noforonina fotsiny.
4. Ataovy azo antoka fa ara-dalàna sy misy ny zava-misy rehetra.
Alohan'ny hividianana fananana iray dia ilaina ny manamarina ny tompon'ny mpivarotra ary mamaritra raha manana fahefana hamidy amina trano iray manokana izy ireo. Ilaina ihany koa ny fijerena ny mombamomba ny fifanatonana tany am-boalohany momba ny teti-tany na koa hamaritana raha matanjaka na tsia ilay tetikasa.
5. Fomba fividianana
Mba hividianana tanety any UAE, tsotra fotsiny ny fizotran'ity raharaha ity rehefa nahalala ny tany mety tsara ny firenena tsy-UAE / GCC izay manatanteraka ny fepetra takian'ny lalàna. Raha ny marina, ho an'ny olom-pirenena tsy UAE mitady hividy, ny faritra voatondro dia mbola mivoatra toy izany, ny sehatra izay mahaliana azy ireo mividy dia mazàna dia eo ambany fifehezan'ny mpamolavola tompona na mpamorona. Ny dingana dia ahitana ny fandoavam-bola amin'ny trano findramam-bola taorian'ny nanatonan'ireo mpamorona sy nandoa isan-jaton'ny vidin'ny varotra. Avy eo ny mpivarotra dia afaka manohy manova ny titre de titre miankina amin'ny alalana na mahazo taratasy fanamarinana tsy misy fanoherana ilay izy.
Loza mifandraika amin'ny fividianana trano fivarotana any UAE
Ny loza ateraky ny fividianana tany any Dubai dia mety ho lafo be amin'ny mpividy voalohany. Ilaina ny fikarohana sy ny fiantohana fa ny sombin-tany dia azo ara-dalàna na avy aminao amin'ny maha-mpividy anao na amin'ny lafin'ny mpivarotra. Amin'ny fanarahana ireo dingana ireo dia azonao atao ny misoroka ny loza toy ny olana ara-dalàna momba ny fananan-tany ary koa ny fisorohana ireo olona tsy mahalala fomba izay mety hivarotra tany izay tsy amidy amin'ireo mpividy tsy ampoizina.